lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > Mialà ary miandrasa!
Indraindray, toa fiandry ho sarotra indrindra ho antsika ny fiandrasana. Rehefa avy mihevitra isika fa fantatsika izay ilaintsika ary mieritreritra isika fa vonona amin'izany, ny ankamaroantsika dia mahita ny fiandrasana maharitra saika tsy azo ovana intsony. Ao amin'ny tontolo andrefana dia mety ho diso fanantenana sy tsy manam-paharetana isika raha tsy maintsy miandry dimy minitra amin'ny akanjo tsy misy vy ao amin'ny hotely fisakafoanana haingana, rehefa mipetraka ao anaty fiara sy mihaino mozika. Alao sary an-tsaina ange ny fomba fahitan'ny renibeny anao.
Sahiran-tsaina sy sahiran-tsaina i Saoly Mpanjaka teo am-piandrasana ny hahatongavan’i Samoela hanatitra ny sorona ho amin’ny ady (1 Sam3,8). Nanjary sahiran-tsaina ny miaramila, nandao azy ny sasany, ary noho ny fahasorenana noho ny fiandrasana toa tsy nisy farany, dia nanao sorona ny tenany ihany izy tamin’ny farany.Mazava ho azy fa tamin’izay i Samoela no tonga farany. Nitarika tamin’ny fiafaran’ny tarana-mpanjakan’i Saoly izany zava-nitranga izany (and. 13–14).
Amin'ny fotoana iray na hafa, mety ho nahatsapa toa an'i Saoly ny ankamaroantsika. Matoky an'Andriamanitra isika, saingy tsy takatsika ny antony tsy hidiranany na tsy tony ireo ranomasina. Miandry sy miandry isika, toa miharatsy sy miharatsy ny toe-javatra, ary farany, toa tsy hihoatra ny zavatra azontsika atao ny fiandrasana. Fantatro fa tsapako fa indraindray isika rehetra dia mahatsapa eto Pasadena ary azo antoka fa ny vondronay rehetra rehefa namidy ny fananantsika tany Pasadena izahay.
Mahatoky anefa Andriamanitra ary mampanantena izy fa hitondra antsika amin'ny zavatra rehetra hihaona amin'ny fiainana. Efa nanaporofo izany indray mandeha izy. Indraindray mijaly amintsika izy ary indraindray - somary tsy dia fahita firy intsony - toa ajanony izay toa tsy nifarana hatrizay. Na izany na tsy izany, ny finoantsika dia miantso antsika hatoky azy - matoky fa hanao ny tsara sy tsara ho antsika Izy. Rehefa mamerina isika dia afaka mahita ny hery azontsika nandritra ny alina niandrasana andro farany ary manomboka mahazo ny fahatsapana fa ny traikefa maharary dia mety nitsoaka tokoa.
Na izany aza, dia tsy latsa-danja amin’izany ny miaritra mandritra izany, ary miara-miory amin’ilay mpanao salamo izay nanoratra hoe: “Matahotra indrindra ny fanahiko; Tompo ô, mandra-pahoviana!” (Sal. 6,4). Misy antony nandikana ny teny hoe “faharetana” ho “fahari-po” ny fandikan-tenin’ny Baiboly King James taloha!
Mitantara momba ny mpianatra roa izay nalahelo teny an-dalana ho any Emaosy i Lioka, satria toa very maina ny niandry azy ireo ary very ny zava-drehetra satria maty i Jesosy.4,17). Tamin’izay fotoana izay indrindra anefa no nandehanan’ny Tompo nitsangana tamin’ny maty, izay nametrahan’izy ireo ny fanantenany rehetra, ka nampahery azy ireo – tsy fantany akory izany (and. 15-16). Toy izany koa indraindray no mitranga amintsika. Matetika isika no tsy mahita ny fomba iarahan'Andriamanitra amintsika, mitady antsika, manampy antsika, mampahery antsika - mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka.
Rehefa namaky ny mofo tamin’izy ireo i Jesosy dia “nahiratra ny mason’izy ireo, ka nahafantatra Azy izy ireo, ary tsy hitany intsony Izy. Dia niresaka hoe izy: Tsy nangorakoraka va ny fontsika, raha niresaka tamintsika teny an-dalana Izy ka nanokatra ny Soratra Masina tamintsika?” (V. 31-32).
Rehefa matoky an’i Kristy isika dia tsy miandry irery. Mitoetra eo amintsika isaky ny alina maizina Izy, manome antsika hery hiaretana sy fahazavana hahitana fa tsy tapitra ny zava-drehetra. Manome toky antsika i Jesosy fa tsy hamela antsika ho irery Izy (Mat. 28,20).